Atrikasa momba ny vina entina manohana ny « éthanol combustible » eto Madagasikara
Inona ny vina entina manohana ny « éthanol combustible » eto Madagasikara ?
Izany fandinihana izany no nahatonga ny USAID, ny MICA ary ny Sampandraharaha DALBERG nikarakara atrikasa tetsy amin’ny Carlton anio 09 Martsa 2020.
Ny Sampandraharaha DALBERG dia nanatontosa fikarohana mikasika ny fahafahana mampiasa ny « éthanol combustible » ho solon’ny arina (saribao) sy ny kitay eo anivon’ny tokan-tranon’ny Malagasy.
Vokatr’ity atrikasa ity dia hisy tondrozotra nasionaly hatsangana ho amin’ny fametrahana izany sehatra izany amin’ny fotoana maharitra sy ho amin’ny fampiharana ireo hetsika sy asa entina hampandrosoana ny famokarana sy ny fivarotana ny « éthanol combustible » eto Madagasikara.
Ny famolavolana ny tondrozotra dia miainga avy amin’ny zava-misy eto an-toerana, noho izany dia nifantoka tanteraka tamin’ny toe-javatra hiainan’ny Malagasy ny fifanakalozana nandritra ny atrikasa hirosoana amin’ny dingana manaraka.
Araka ny antontan’isa dia 98% ny tokan-trano eto Madagasikara no mampiasa ny arina sy ny kitay ho an’ny lakozia ka mampiroborobo ny fandripahana ala. Tonga izao ny fotoana hanesorana ireo sakana ho an’ny fampiasana ny « éthanol combustible » eto Madagasikara.
Ny fampiasana izany dia mitondra vahaolana azo tsapain-tanana amin’ny fitandroana ny tontolo iainana ary mifandray amin’ny tanjona ho an’ny fanodinana ifotony izay isan’ny laharam-pahamehan’ny MICA eo amin’ny indostrian’ny Madagasikara.
📣 Vaovaon’ny faritra : Bongolava